Ị na-achọ ụzọ iji tọgharịa jailbroken iPhone? E nwere ọtụtụ ihe ngwọta maka ị iji tọgharịa gị jailbroken iPhone. A nrụpụta ga weghachi ngwaọrụ dị ka ọ bụ n'ihu jailbroken, na i nwere ike iji iPhone dị ka a na-abụghị jailbroken iPhone. Mkpa ka i nwere ọtụtụ mgbagwoju ọrụ ma dị nnọọ ka iTunes ruo ụbọchị ma na-agbaso nkịtị ụzọ iji tọgharịa jailbroken iPhone dị ka a gwara ke ibuotikọ emi. I nwekwara ike nweta enyemaka site na nke a isiokwu banyere resetting iPhone enweghị adịkwa jailbroken na ndepụta nke ngwá ọrụ ndị ị pụrụ iji ịrụ a nrụpụta edinam. Otú ọ dị, jide n'aka na-na-a nkwado ndabere na mpaghara n'ihu na-eji ndị na-esonụ ntụziaka na ọ ga-eme ka ị mma si adịkwa gị mkpa data gị iPhone.
Part 1. Tọgharia jailbroken iPhone ka a Nkịtị iPhone
Part 2. Tọgharia jailbroken iPhone-enweghị adịkwa jailbroken Atụmatụ
Ị nwere ike mfe na-eso nzọụkwụ kọwara n'okpuru ebe iji tọgharịa gị jailbroken iPhone. Ma mkpa ka ị tụlee ụfọdụ Atụmatụ tupu arụ ndị omume.
iTunes na kọmputa gị mkpa ka a emelitere.
Na-a dị mkpa ndabere maka ngwaọrụ gị data ime ka ha dịghachi mgbe e mesịrị.
Were oge zuru ezu iji tọgharịa gị jailbroken iPhone na Iweghachi ndabere data.
Mee ịgbanyụ 'ebighị mkpọchi' ọ bụrụ na i tụgharịa ya on. Ị nwere ike ịchọta nhọrọ here- Ntọala> iCloud> Chọta My iPhone> On / Gbanyụọ.
Nzọụkwụ 1: I kwesịrị ikwunye na ekwentị gị na kọmputa, jide n'aka na-emeghe iTunes na pịa ya.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, ị ga-ahụ na 'Weghachi' nhọrọ. Ị ga-pịa ya. I nwere ike na azụ-elu ekwentị gị si na-abụghị jailbroken ngwa iji weghachi ha mgbe resetting. Ị iPhone ga-ewe oge mgbe ahụ ibudata, wepụ na wụnye ọhụrụ femụwe.
Nzọụkwụ 3: iTunes ga-mkpa gị ikike ọzọ iji weghachi ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4: Chere na-esi gị iPhone na-restarted na mgbe a Malitegharịa ekwentị gị nwere ike iweghachi gị ndabere data. Ọ bụrụ na ị nwere ohere ka gị na cellular data, ekwentị gị ga-weghachi-akpaghị aka.
Atụmatụ: Gịnị ga-eme ndị jailbroken Iphone Mgbe resetting?
Gị jailbroken emeghị ka ọ bụla mgbanwe mgbe ọ na e mere. Na nkịtị nrụpụta nnọọ ka gị iPhone-eweghachi ya gara aga ụzọ. Ọ ga-enye gị a n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ ekwentị dị ka tupu jailbroken ma na a na-abụghị jailbroken ala.
E nwere ndepụta nke ngwá ọrụ na-dị iji tọgharịa iPhone enweghị adịkwa jailbroken. Ọkara Weghachi, iLEX Ararat, Wondershare SafeEraser, wdg bụ ụfọdụ n'ime ndị kasị ewu ewu na kasị mma na-arụ ọrụ ngwaọrụ a akara maka resetting iPhone enweghị adịkwa jailbroken.
Wondershare SafeEraser bụ ihe ndị magburu onwe software maka resetting ihe iPohne si adịkwa ya jailbroken na ọhụrụ melite bụ dakọtara na iOS 9.0. Nanị otu click nwere ike inwe ị ihichapu niile onye data na kasị dị irè ma kasị dịrị nchebe data echebe ụzọ. Ị nwere ike nweta ya free si n'okpuru njikọ na-agbalị ma ọ bụrụ na ị chọrọ inwe niile atụmatụ, ị ga-ebubo maka a Ikikere ngwa. Ọ pụrụ inyere gị aka tọgharịa gị jailbroken iPhone na-enweghị ihe ọ bụla data ọnwụ.
Ahịa: Free Iji na-agbalị, ịzụta ya na USD $ 29.95 (Basic ikike) / $ 39.95 (Family ikike)
Download free ikpe version:
Ọkara Weghachi bụ aha maka resetting jailbroken iPhone ka ya gara aga ala na-ewu ewu maka kasị mma na-arụ ọrụ akụkọ ihe mere eme iOS 5.0-6.1.2. Nke a software dị maka Windows & Linux x86_64 version na 32 Bit Linux na Mac ehi na nsụgharị ndị n'okpuru development. A Mmepụta si Windows na iOS, Coolstar mepụtara ọkara Weghachi maka iOS 7.0.x jailbroken iPhone. Ị nwere ike ibudata ya free site na njikọ n'okpuru.
iLEX Rat bụ ihe ọzọ na ngwọta maka jailbroken iPhone iji tọgharịa ngwaọrụ enweghị adịkwa jailbroken, ma, ọ chọrọ na-agba ọsọ n'ụzọ kwụ ọtọ si jailbroken na ngwaọrụ na ị na-aga ịrụ resetting. Ọ bụ yiri ngwa ọdịnala dị ka ọkara Weghachi, na i nwere ike ibudata ya free si n'okpuru njikọ ma ọ bụ Cydia ụlọ ahịa. Ọ chọrọ bụghị jikọọ na ọ bụla na kọmputa, ma ọ nwere ike igosi na iOS 7 ngwaọrụ. The iLEX oke iOS 7 beta mkpa na-arụnyere mgbe na mgbakwunye na nke ngwa repository na Cydia.
Ebe nchekwa Clean - The Mac Cleaner
Otú nyefee Data si Motorola ka iPhone
> Resource> iPhone> Tọgharia Jaibroken iPhone na /-enweghị adịkwa jailbroken Atụmatụ